हात खुट्टा झमझमाउने र निदाउने समस्या छ ? उसोभए शरीरमा हुनसक्छ यस्तो खराबी - Khabar Nepali
होमपेज / जीवनशैली / हात खुट्टा झमझमाउने र निदाउने समस्या छ ? उसोभए शरीरमा हुनसक्छ यस्तो खराबी
के तपाईलाई हात खुट्टा तातेको, निदाएको, झमझमाएको महसुस भएको छ ? शरीर को अंगहरु झमझमाउने, निदाउने, पोल्ने, कारणहरु बिभिन्न छन् । जसमा के हि प्रतिशत अन्य रोगको कारणले पनि हात, खुट्टा र शरीर झमझमाउँछ । हात, खुट्टा, शरीर निदाउनु, पोल्नु, झमझमाउनु को बारेमा बुझौं ।
तपाइले हात वा खुट्टा निदाएको वा झमझम गरेको महसुस पक्कै गर्नु भएको छ होला । कुनै ठाउमा धेरै लामो समय सम्म एकै पोजिसन मा बसी रहदा यस्तो महसुस हुने गर्दछ ।
तर यदि दैनिक सजिल्यै बसेको बेला पनि हात खुट्टा निदाउछ भने हामीले यो पनि बुझ्न जरुरी छ कि शरीर मा रगत को संचाल्न मात्र नभई अन्य कुनै रोग को कारण पनि यस्तो भैरहेको छ यो बेला तुरन्त डाक्टर कहा चेक गर्न जानु पर्दछ ।
उमेर जति बढ्दै गयो त्यती नै हामिलाई विभिन्न रोगले च्याप्दै जाने गर्छ । तर पनी हात खुट्टा निदाउने समस्या यदि निरन्तर भइरहे डाक्टर सँग परामर्स गरेर डाक्टरले के९को कारण ले हात खुट्टा निदाइरहेको छ भन्ने बारेमा जानकारी दिने छन् ।